आजको राशिफल : बि.स.२०७६ साल चैत्र ७ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० मार्च २० तारीख – पुरा पढ्नुहोस्……
मिन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । पुराना मित्रजन सगँको भेटघाटले मन हर्षित रहला । बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ ।- धनकुटाखबर।
Prevगगन थापाको ‘आʼईडिया’मा टेलिकम रिङʼब्याक टोनमा कोʼरोना सचेतना सन्देश बज्ने ।।
Nextनेपालमा सार्वजनिक भयो ओप्पो एफ-१५ ,कति छ त बजार मूल्य र विशेस्ता ? हेर्नुहोस्
दुर्गा प्रसाईको मुख बन्द गर्ने की हामी सिलाईदिउ भन्दै बंगलादेशबाटै MBBS छात्राहरुको चेतावनी ! – हेर्नुहोस् सिधाकुरा जनतासँग
गर्भमा ६ महिना, काखमा १५ महिनाको बच्चा सहित किन रुदै आइन् मिडियामा यी महिला ?-हेर्नुहोस( भिडियो हेर्नुहोस)